मरेको पाइलटलार्इ दोष नदिअौै उनले नबचाएको भए पुरै एयरपोर्ट ध्वस्त हुन्थ्यो !::Digital News Paper
मरेको पाइलटलार्इ दोष नदिअौै उनले नबचाएको भए पुरै एयरपोर्ट ध्वस्त हुन्थ्यो !
युएस बगंला एयरलाइन्सको बिमान दुर्घटना भएपछी दुर्घटनाको कारण के थियो ? र यसको जिम्वेवार को हो भन्ने बिषय सर्वाधिक चासोको बिषय हो । दुर्घटनाको कारण बिभत्स रुपमा यात्रुहरुले ज्यान त गुमाए । तर यो दुर्घटनाले अरु थप क्षती निम्त्याउने सम्भावना थियो । यद्यपी त्यस्तो भएन । त्रिभुवन बिमानस्थल प्रशासनले प्रारम्भीक रुपमा दुर्घटनाको मुख्य कारण भनेको चालक दलका सदस्यले कन्ट्रोल रुमको आदेश नमान्नु हो भनी दावी गरेको छ ।
यो सत्य पनि होला । तर अर्को महत्वपुर्ण कुरा चाही के हो भने, चालक दलका सदस्यले कन्ट्रोल रुमको आदेश नमान्नु एउटा बिशष हो, तर यदी चालक दलका सदस्यले साबधानी नअपनाएको भए पुरै बिमानस्थल नै ध्वस्त हुने सम्भावना थियो । बिस्तृत जान्नको लागी तलको भिडियोमा हेर्नुहोस